Kandidà Rajoelina tany Alaotra Mangoro: « Hamboarintsika ny lalam-pirenena RN 44 » | NewsMada
Nitohy tany amin’ny kaominina Didy sy Manakambahiny Andrefana ary hatrany Morarano Kraoma ny dian’ny kandidà Rajoelina amin’ny andro fahatelo amin’ny propagandy, omaly.
“Hanao velirano aminareo aho fa hamboarintsika io lalana RN44 io amin’ny herintaona. Izaho tsy hamadika anareo sy ny vahoaka malagasy izany. Efa vita fanadihadiana tamin’ny fitondrana Tetezamita io », hoy izy. Nambarany fa amin’ny maha sompitr’i Madagasikara iny faritra iny, hojerena ny hampitomboana ny vokatra.Hamboarina ny tohodrano ao Ranomena hahafahana mampitombo ny velaran-tany ho volena. Hampiana amin’ny zezika ny tantsaha. Tahaka ny fampanantenany tany amin’ny faritra hafa momba ny tsy fandriampahalemana, nanteriny fa efa tonga ny “drones”. Hametrahana “puce” ny omby hanarahan-dia azy.
Hividy helikoptera miisa 10
Hapetraka ny vondron-kery manokana hiady amin’ny asan-dahalo sy jiolahy ary ho avy ny helikoptera miisa 10. Homena fiofanana ao anatin’ny fotoana fohy ireo tanora tsy manana tany ary hahazo velaran-tany 10ha ahahafahany mamboly sy miompy. Nampanantena koa ny kandidà Rajoelina fa hatao kianja “synthétique”, manara-penitra ny ao Ambatondrazaka. Eo amin’ny fanabeazana sy ny fampianarana kosa, nambarany fa hatao manara-penitra ny sekoly, manomboka amin’ny EPP izany. Ahitana efitrano famakiam-boky sy ho an’ny informatika ny trano fianarana. Hataontsika EPP manara-penitra ny EPP rehetra.
Tokony ho mailo amin’ny androm-pifidianana
Mba hisy bibliothèque, salle informatique. Hatao manara-penitra ny hopitaly… “Hanampy anareo aho, ny tanora, ny tantsaha, ny vehivavy, ny tsy anasa, ny marefo. Ampio aho hahafahako manampy anao sy manavotra an’i Madagasikara. Mila mifanome tanana isika. Efa voalohany isika tamin’ny fihodinana voalohany ary mbola ho lohany isika hitondra ny firenena aorian’ny 19 desambra izao”, hoy ihany izy.
Ankoatra izany, niantso ny rehetra ny tenany mba ho mailo amin’ny fifidianana ka nilazany fa tsy avela hisy hanodinkodina intsony ny safidy. “Efa nisy ny nangala-bato teo. Jereo tsara ny PV ka ampitahao raha mitovy eny amin’ny tabilao sy ny tatitra an-tsoratra. Handefa angidimby aty aho haka ny voka-pifidianana aty”, hoy ny kandidà Rajoelina.